Yiziphi izivivinyo ezimbi nje ngezimfashini zemifashini ngezinye izikhathi ezixazulula abaklami besikhathi samanje, ukuze nje udale into entsha ngokuphelele futhi eyingqayizivele ngohlobo lwayo. Ikakhulukazi liphathelene nezicathulo zabesifazane. Ubulili obuqinile akuyona inhlamba kakhulu kulezi "chips". Kubantu, umgomo oyinhloko wokuthenga izicathulo ulula futhi ukubukeka okuvamile. Kodwa amantombazane ngezinye izikhathi akulungele ukubeka imali eningi kakhulu, ukuze nje aphume esixukwini. Kodwa-ke, ezinye izicathulo ezingavamile, ezinikezwa namuhla ngama-stylists, aziqondakali kalula ngalokho okumele sizihlanganise. Futhi ngisho nenqubo yamasokisi akungabaza. Phela, leli fomu ngezinye izikhathi lishaya nge-eccentricity.
Zihlobo luni izicathulo esinikezayo? Amamodeli angavamile ngokushesha abambe iso ngefomu elingajwayelekile lezithende. Isibonelo, ezinye izinto ezihlukahlukene zinezinto ezisekelwa ngesimo somuntu wesilisa, isifuba sasokazi esingenalutho noma ingxenye ehlukile yomzimba. Izicathulo ezingaphezu kanzima zinesithende ngesimo sebhasi. Kodwa ezinye izinhlobo zenza umangaze ngesikhathi esifanayo enomusa futhi enzima. Izicathulo ezinjalo ezingavamile zisezingeni eliphezulu lezinkuni zemvelo. Kodwa ngenkathi konke kuqoshiwe. Ngakho-ke akuqondakali ngokuphelele ukuthi isithende somlenze sikwazi kanjani ukumiswa okwesikhashana. Nakuba le nketho isengcono kakhulu. Ngokwemvelo nje.
Ezinye izicathulo ezingavamile zasiletha kumculi ohlambalaza u-Lady Gaga. Uvame ukuvela esiteji ngemifanekiso enhle kakhulu. Futhi kusuka kuye wahamba ngezimpawu ezicathulweni, ehlanjululwe ngamameva amancane. Kulesi simo, isiteji salezi zicathulo sinomumo wokuqhafaza. Ngokusho abanikazi bezithombe ezinjalo, ukugqoka kuzo kuyinjabulo. Kodwa ungagqoki - omunye. Phela, akuzona zonke izintombi ezithanda lezi zicathulo ezingavamile.
Kodwa ngisho naphakathi kwamamodeli amahle kangaka kunomholi. Kunzima ukucabanga ukuthi okuthile kuthatha indawo ehloniphekile, lapho i-intanethi idinga izithombe ezingenakucatshangwa zezicathulo zangaphandle. Izicathulo ezingavamile kunazo zonke, ngokusho kwabesifazane abaningi, zenziwe ngesimo sokungabonakali "somunye umuntu" esivela kufilimu efanayo emnandi. Banesithende esiphezulu, kodwa kunesisindo esiqinile, esontekwe "umsila" wesidalwa esingenabuhlobo obuhlukile, futhi nesipulatifomu esinamandla. Ngokuvamile, lo modeli ufana nezicathulo zokudansa ezithandayo ku-pylon.
Futhi lena yodwa kuphela eyizinkulungwane eziyishumi-nhlobo zezinto abakhiqizi befashini abasinikeza zona. Ezinye izicathulo ezingavamile zibheke phansi uma uzibeka ezinyaweni zakho. Abanye bayathandeka ngokuchichima kwezimbali ezifakelwayo ezenza izicathulo zibe umbhede wangempela wembali. Imodeli yesithathu yenziwe ngokuphelele ngesimo senqola yokudla ngamasondo. Kunzima ukucabanga ukuthi uhamba kanjani ngobuhle obunjalo. Kodwa yikuphi uhlobo lokuzidela okungelona ngempela "izinyathelo zezingonyama zezwe" ezokuwina isihloko esithi "indlovukazi yokwethuka". Nakuba kulula, futhi ungakhohlwa. Uma kungenjalo, ngemva kokuhamba ezimbalwa imilenze yakho izobukeka idangele kakhulu. Futhi ukuzidela impilo yakho ngenxa yethandwa yesikhashana emvelweni kuyinjabulo engathandeki.
Meaning of igama Irina kuka abanikazi ezihlukene zokubiza igama?